Bathi bazizwa bengaphephile abomndeni owaqothwa | News24
Bathi bazizwa bengaphephile abomndeni owaqothwa
ABOMNDENI wakwaMncwabe bathi bathuke kwaphela nasozwanini ngenkathi befika ekhaya labo kugqekezwe enye yezindlu zokulala.
Lomndeni usanda kuba sematheni emva kokungenelwa abantu babulala amalunga ayisishagalolunye okubalwa izingane ezisencane kanye nezaguga ezimbili kubangwa ezomndeni.
Lomndeni uthi udumele ngesikhathi ubuya okokuqala ngoLwesibili selokhu kwenzeka kwalomshophi behamba nongqongqoshe wamaphoyisa uMnu. Nathi Nhleko befica amawindi ebhodloziwe nezimphahla ebazishiya ngelanga lomngcwabo zingasekho.
Okhulumele lomndeni uBazo Mbhele ongumshana uthe kuyabathusa lokhu abakuficile.
“Ngempela kushukuthi asiphephile futhi basekhona abasele abasolwa abangaboshwanga. Yini eyenza umuntu ukuthi azontshontsha imimmese, izihlalo kanye nezinkomishi ebezisetshenziswa abantu abangasekho?,’ kusho uMbhele.
Uthe lokhu kuyakhombisa ukuthi khona okusabalandela.
UMlungisi Mncwabe okunguyena owakwazi ukuthi azivikele ngalobo busuku benhlekelele uthe akazi ukuthi angathini ngendlela labantu abenza ngayo.
Uthe amaphoyisa mawaqhubeke nokuphenya njengoba kukhombisa ngokusobala ukuthi lomndeni usahlaselwa.
Amaphoyisa acele noma ubani onolwazi ngalesi sigameko awalume indlebe kubanje izigilamkhuba.